Fikarohana momba ny firaisana Kundalini sy Fahazavana-Zava-niainana manokana, nataon'i Shai Tubali - Fikarohana Reincarnation
Addendum amin'ny: Walter Semkiw, MD
"Tonga ny fanambarana avy any an-danitra, mba hisidina ny voro-manidina." Rumi
Kundalini: Ny masin'ny fanavotan'Andriamanitra
Te-hanomboka amin'ny angano kely noforonin'ny tena aho, izay misy fahamarinana lehibe iray. Rehefa noforonin'Andriamanitra ny fanahy ary nalefany tamin'ny diany nampanan-karena izaitsizy, nefa nampijaly ny olombelona tonga nofo, dia fantany fa rariny loatra ny fampitaovana azy amin'ny fitaovana sasany hahafahany mamonjy ny tenany ary hiverina any Aminy indray andro any. Fantany tsara fa ny herin'ny herin'ny tany dia hanintona azy, ny loza ara-batana dia hanisy lalina ao aminy ny vatany sy ny fahavelomany, ary ny fahafinaretan'ny fahatsapana dia hampiditra azy ao anaty firaiketam-po lalina amin'ny vatana. traikefa. Tsapany fa nanararaotra nanararaotra izy tamin'ny fandefasana azy ho any amin'ny lohasahan'ny fanadinoana tsy misy farany antsoina hoe "Tany", ary ny elanelana manasaraka ny vatana voafetra sy ny tsy manam-petra amin'ny fahatsiarovan-tena dia tsy azo zakaina fotsiny.
Ka inona no azony natao? Ao amin'ny fisainany feno fahendrena, dia nandinika mekanika iray izay azo ampidirina amin'ny zorony indrindra indrindra amin'ny vatan'olombelona. Ity dia fomba iray izay mety ho mahery vaika handresena ny fahamboniana sy hampihenana ny fanahy amin'ny soritr'aretina ara-tsaina, ara-pihetseham-po ary ara-batana. Tokony ho afaka hilazana amin'ny fanahy fa eo amin'ny lalana marina amin'ny alàlan'ny fanaovana azy io amin'ny endrika lehibe indrindra amin'ny fanaingoana tsy tanteraka. Ary afaka manompo ny fanahy ho toy ny fiaramanidina ethereal izay ahafahany manidina eny an-danitra rehetra ary ho voatazona mankany amin'ny fonenany tany am-boalohany; ny tena toetrany amin'ny maha-tsy manam-petra azy.
Raha mandinika ny safidin'ny rafitra mavitrika mahery vaika Andriamanitra izay afaka manao fahagagana toy izany ao anatin'ny vatan'olombelona voafetra, ny iray amin'ireo arkeolo mamorona kokoa no manakaiky ny sarin'ilay caduceus, izay andro iray dia hiseho avy amin'ny sain'olombelona tsy mahatsiaro tena amin'ny endriny ny mpiasan'i Hermes sy ny mariky ny fitsaboana. Ny fitovin'ny ADN, ny fakana anaty no nanaovana ny zavamananaina rehetra. Ity rafitra ity, nanoro hevitra ny anjely Andriamanitra, dia hisintona ny herin'ny Tany rehetra amin'ny alàlan'ny tsipika iray ary hanaparitaka sy hamerina ny elatry ny fanahy mba hahatsiarovana azy fa afaka manidina.
Nanaiky Andriamanitra ary nasainy nanangana ity vondron'olona malemy ity. Nanamboatra harona fantsom-pahavitrihana feno rantsankazo misy zorony iray eo afovoany izy ireo, izay nanomboka teo am-pototry ny hazondamosina ary nifarana teo amin'ny tampon-doha. Tao am-pototr'io fantsona io no namboleny ny voan'ny fahatsiarovan'Andriamanitra, tsiro avy amin'ny sainy manokana. Fantany fa io tselatra io dia hijanona ho matanjaka hatrany raha toa ka tsy ho matotra ny fanahy mba hahalalanao tanteraka sy hitarika ny fahazavan-toetra mandritra ny vatana.
Miaraka amin'ny faharetany sy ny fitiavana tsy manam-petra, hiandry ny fotoana izay hifohaan'ny fanahy amin'ny faniriana hiverina izy. Rehefa tonga izany, ny tsilo izay namboleny dia tsy ho voatifitra miaraka ary hanomboka ny iraka tsy ahitam-bokany mba hampivoarana ny maha-olona azy tsirairay avy, avy amin'ny resaka matevina ka ho fanehoana ny maha-Andriamanitra miafina azy.
Angano fotsiny angano ity? Angamba tsy nisy anjely nanontany an'Andriamanitra. Ankoatra izany dia tsy angano fotsiny velively. Raha ny marina, ho an'ny fanahy matotra izay maniry fatratra an 'Andriamanitra, io fitaovana an-kolaka io dia zavamiaina velona, ​​izay tsy hita maso noho ny vatana ara-batana sy ny fanandramana ny fahatsapana. Ao amin'ny lovam-pampianarana Yogic, ity fitaovana ity dia nantsoina hoe "Kundalini." Ny traikefa, izay fantatry ny fomban-drazana esoterika dia iray ihany: mitovy ihany ny fifohazan'ny fon'ny fahatsiarovan'Andriamanitra izay mivory miaraka aminy avokoa ny angovo rehetra. ary manosika azy ireo miakatra miakatra, mandra-pandringany tanteraka ny sakana manify izay manavaka ny olombelona amin'ny tsy fivadihana.
Ny zavatra niainana kundalini fohy fohy dia mety hitranga imbetsaka sy ho an'ny olona maro. Satria, miakatra ambony hatrany i kundalini rehefa misaintsaina sy misaintsaina ny fanahy isika; isaky ny feno finiavana ara-panahy isika ary mitady ny tsy manam-pahalalana. Na izany aza, mba hahazoana ny fahafaham-po tanteraka ny fihoaram-pefy kosmika - ary ny fahafaham-po tanteraka dia afaka midika fotsiny fa tafavory miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena tsy manam-petra ny tselatra -mba ilaina sy maharitra mandritra ny fifohazana mitombo, ilaina amin'ny fomba rehetra.
Ny Kundalini Awakening of Shai Tubali
Fony vao 20 aho dia nahatsapa ny fikasana voalohany hikaroka ara-panahy. Tena tsy azoko mihitsy hoe inona ilay notadiaviko. Fisintonana mahaliana kokoa ho an'ny majika hafahafa hitako tao amin'ny famonoan-kevitry ny Zen-Buddhism izany, ary koa fanantenana mba hialana amin'ny tahotra ara-tsosialy. Ny dingana voalohany lehibe nataoko dia ny fandalinana Transcendental Meditation, izay nohenoako voalohany momba ny Fampahalalana ho toy ny firaisana amin'ny fahatsiarovan-tena manokana miaraka amin'ny fahatsiarovan'izao tontolo izao. Ny fihainoana tamim-pitiavana izay nahatonga ny fanaintainana taloha tao am-poko ary nahatsapa aho fa niantso hifindra ho amin'io fanjakana sarotra izany.
Fotoana fohy taorian'izay dia nandeha tany Inde aho mba hipetraka ao amin'ny ashram sy hitady ireo izay tsy fahalalana ny tanana fa ny traikefa mivantana. Soa ihany, dia nahita ilay mpampianatra voalohany aho, izay toa ahy, Israeliana. Tany Inde aho dia nianatra voalohany-tamin'ny famakiana ny tantaram-piainan'i Jiddu Krishnamurti, izay niaina fifohazana kundalini lehibe tamin'ny faha-29-izay ny fahazavana dia tsy fahitana ara-tsaina fotsiny fa fiovana lalina sy manaitra fiovana lehibe. Noho izany fahatakarana izany, ny fanjakana miavaka-toa ny fijerena ny vatako mandry eo am-pandriana avy amin'ny haavon-tafo ary mifoha amin'ny alina amin'ny hafatra hafahafa sy fandefasana mahery vaika - nanomboka nandresy lahatra ahy fa niditra teo am-bavahadin'ny tsy nahalala aho.
Ny Bliss an'ny Mifohaza Kundalini
Rehefa niverina tany Israely aho dia nifandray tamin'ny mpampianatra voalohany ary nandritra ny roa taona dia nifindra tsy tapaka tamin'ny fanontaniako irery aho mba handany fotoana miaraka aminy, ary ny fomba hafa manodidina. Tamin'ny faramparan'ny roa taona dia nanatrika ny fisintomana mangina nataon'ny iray tamina mpianatra nifoha aho. Rehefa nitombo hatrany ny fahanginana, dia tondraka mafy aho noho ny fahatsapan'ny sendika.
Handeha eny an-dalana handeha amin'ny sakafo maraina aho na any amin'ny trano fisotroako ary, tsy voafehy, hiondrika ao amin'ity sahan-dranon-javamaniry ity sy ny fifaliana tsy manam-petra. Hiala ny saiko, toy ny hoe lasa jamba an'izao tontolo izao aho ary mahay mahita sy tsy mahalala afa-tsy io fahadiovan'ny firaisana io. Nitohy ihany koa izany rehefa tapitra ny fisintonana: na dia teny amin'ny arabe aza dia najanoko io hatsarana mahafinaritra io nefa ny tontolo manontolo dia hanjavona ho rivotra mangatsiaka. Ny mavesatra taloha tamin'izany dia ny fehezanteny mitohy izay toa ao an-tsaiko irery: "Ny fahatsiarovan-tena ihany no misy ary tsy misy zava-dehibe ..."
Ireo fifohazana fohy nefa lehibe dia naverimberina matetika tamin'ny fotoana niarahako nitsoaka mangina ny mpampianatra ahy voalohany. Tany, roa andro talohan'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako 23, dia nanatrika ny fankalazana ny nahaterahan'ny mpampianatra ahy. Nipetraka teo lavitra teo aho, tany ivelan'ny faritry ny olo-malaza, ary nangina ary mbola nitohy.
Tampoka teo, voan'ny fahatapahan-kevitra mazava indrindra izay nataoko hiheverako ny hoe "ny tenako". Rehefa nijery aho dia tsy nisy afovoan-toetra be loatra. Tamin'izany fotoana izany dia fantatro fa tsy fahita firy fotsiny ny fahatsiarovan-tena sy ny an'ny tena manokana, ary tsy dia saro-pady mihitsy izany. Ny fahatsiarovan-tena dia endrika tadidy fotsiny izay niforonan'ny zavakanto tamin'ny fomba nentina noforonina tamin'ny fomba iray izay ahafahan'izy ireo mamorona fitambaran-tsaina sy fitohizan'olom-bitsy.
Miaraka amin'io fahatsapana io, nifoha i kundalini ary nanomboka nihazakazaka nanerana ny hazondamosiko. Nitsoka tamin'ny masoko fahatelo sy ny tampon-dohako ny felam-boninkazo masina. Kundalini dia nivadika an-tampon'ny lohako, hatrany amin'ny habakabaky ny saina kosmika. Sarotra tamin'ny fahasarotako dia namerina ny vatako mahatalanjona lavitra ny fety sy mankany amin'ny morontsiraka tery aho, ary nisy kundalini nitaona ahy ny fahitana ny tena toetrako.
Na inona na inona nojereko, dia ny tenako: ny lanitra misokatra, ny vatolampy, ny ranomasina ary ireo tovolahy nilalao baolina teny amoron-dranomasina, izao rehetra izao dia nisy iray ihany, fikambanana tsy manam-petra, ary izaho no izao rehetra izao ary tsy nisy. afa-tsy. Ny onjan'ny ranomaso sy ny hehy fankasitrahana dia nampihozongozona ny vatako nandritra ny ora maro be.
Roa andro taty aoriana, tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako, dia nahazo avy tamin'ny mpampianatra shaktipat aho, izay fampitana hery ara-panahy avy amin'ny tompony. Ny tanjon'ny shaktipat dia ny hanampy ny kundalini mpitsabo amin'ny hitsangana.
Vao mainka nanadino ny fanadinadinako tena aho. Manomboka amin'ity fihemorana ity dia nanomboka ny ranomaso sy ny fihomehezana nandritra ny volana maro. Fitiavana iray erak'izao tontolo izao no nanenika ny tratrako, raha kundalini kosa tsy nanary ny tsy maha-mahazatra ahy sy ny fihetseham-poko manokana.
Nandritra ny ora maro dia hipetraka tsy mihetsika aho amin'ny fisaintsainana tsy manam-petra sy tsy voamarina. Nanodidina ny efitranoko kely ny fahamasinana. Ny elanelin'Andriamanitra dia taitra nahafantatra ny tenany, ary izay sisa tavela tamiko dia «vavolombelona» gaga iray hafa. Tsy misy na inona na inona avy novakiako tamina boky nanomana ahy ho amin'izany; lavitra ny fivoaran'ny saina ny zavamisy kundalini. Nandritra ny taona iray manontolo, mandra-pahatongan'ny taona 24, dia nandia ity lalan'ny fahanginana tsy hay lazaina ity aho izay fahamarinana irery no afaka miteny.
Ny fahafatesan'ny Ego tamin'ny alalàn'i Kundalini
Teo anelanelan'ny taona 24 ka 26, ny fizotran'ny kundalini, saika tsy dia hita loatra. Miaraka amin'ny rafi-pitondrana tena mbola kely sy tsy voaomana ary amin'ny tsy fisian'ny fitarihana ampy, io dingana io dia lasa izay antsoina hoe "kundalini krizy." Tsotra, roa taona izay no nahatsapako fa ho faty aho. Imbetsaka aho no nandia ny fanahiko nandao ny vatana tamin'ny satrobon-dohako. Nandalo alina tsy natory aho ary feno zava-tsy fantatra. Niaina ny mual mafy sy ny marefo mahery vaika mahery vaika, izay nahatsapako fa tsy misy sakana iray manavaka ny vatako amin'ny tontolo hafa. Tonga avy eo ny fahaiza-miafina.
Tsy misy na iza na iza mpanasitrana ary tsy misy mpampianatra-mahatakatra ity fizotran-javatra ity. Ilay mpampianatra ahy manokana dia very hevitra satria tsy kundalini izy. Soa ihany fa nahatonga ahy hihaona tamin'ny mpampianatra ahy faharoa, yogi amerikana marina, izay nitondra ahy teo ambany elany. Notsaboiny tamim-pitandremana tamina shaktipat aho, nomeny akora Ayurvedic sy zava-mahadomelina ara-pahasalamana, ary nitarika ny fahoriako.
Ny nanombohan'ilay fomban-drazana kundalini (ny lovantsofina Yoga Siddha), dia nampahatsiarovako ahy ity fitaovana masina ity. Tamin'ny alalany koa dia fantatro ihany koa fa na dia ny fifohazana mahery vaika sy mazava tsy azo ovana izay nampihozongozona ahy hatramin'ny fototry ny maha-olona ahy dia tsy ampy. Mba ho tanteraka ny fanafahana ary ny fampidirana ny tso-po masina ao amin'ny Andriamanitra mba ho farany, mila kundalini manaisotra karazana sakana maro isan-karazany, ao anatin'izany ny fanaovan-javatra manan-danja amin'ny fiainana taloha sy ny fiainana ankehitriny. Kundalini dia tsy maintsy namerina namerina ara-bakiteny ny fizotran'ny karmika-ho fanakonana ny faniriana lalina, ny faniriana, ny hatezerana ary ny tahotra - mandra-pahatongan'ny olona iray, avy amin'ny vatana ka hatrany amin'ny fanahy, dia lasa voadio tanteraka. Teny an-dalana dia niseho ny fivoaran'ny fanahiko; ireo lohahevitra fototra sy lesona tsy maintsy nihaona tamiko nandritra ny androm-piainany. Mandritra izany fotoana izany, ny fianarana manan-danja sy ny fahafaha-mivoatra no nipoaka avy tamin'ny lasa taloha.
Naharitra io dingana io, nanomboka tamin'ny andro nifohazako tamin'ny taonan'ny 23, sy ny sisa, mandritra ny folo taona. Tamin'ny taona 33 dia nahita ity mekanika masina ity izay nifoha tanteraka tao anatiko, tamin'ny fomba izay azo tsapain-tanana toy ny zavamisy ara-batana. Azoko fantarina tsara sy mivantana ny fiparitaky ny hery misintona kosmika manerana ny hazondamosiko; renirano izay matetika mahatsapa toy ny renirano mikoriana. Tsy azo lavina ny fifamatorana misy eo amin'ny ony toa an'io renirano io sy ny fahatsiarovan-tena miray hina ary ny fanimbana na dia ny fomban'ny tenany ihany aza.
Rehefa nitantara izany tamin'ny mpampianatra ahy dia nanaitra ahy izy tamin'ny nanambarany fa farany dia nanatona ny fanafahana tanteraka ny fanahiko. Ao amin'ny lovantsofina, dia heverina ho "Jivamukti," izay midika fa ny fanahy malalaka dia misy nefa ao anaty vatan'olombelona. Tsy azoko marina ny zavatra resahiny, fa tamin'io fotoana io dia nahatsikaritra io onin'ny fiainana mandrakizay io aho, na andro na alina, ka tsy nanam-pitiavana intsony ny fomba fisarahana sy ny maha-izy azy.
Ny fotoana nanjavona. Nitsahatra ny traikefa. Maty ny hetahetan'ny fiainana. Tsy nahitana tantara manokana. Nosakanana toy ny boky iray izay nifarana teo afovoan'ny fehezanteny ny tantaram-piainako.
Kundalini ho Fanahy Masina
Kundalini dia tsy voatery hifoha mivantana ary am-kitsirano. Izy io dia afaka hamoha azy irery, ho vokatra voajanahary amin'ny fanehoana ny filàna ara-panahy sy ny fahavelomana ny fanahy. Nilaza izany, misy fomba fanao isan-karazany izay afaka manaitra an'ity hery an-kolaka ity ary hitarika azy amin'ny alàlan'ny hazondamosiko mavitrika.
Ny fifohazana kundalini ankolaka dia mety hitranga vokatry ny fandaniam-potoana eo amin'ny fisian'ny tompona fanahy marina (satsang); fialam-bolo mangina sy fialam-baravarana maizina ary koa fihemorana ny fifadian-kanina ara-panahy sy ny fomba feno fanontanian-tena na fandinihana ny fahamarinana ara-panahy. Ny fifohazana mivantana kundalini dia mety hitranga amin'ny alàlan'ny fahasoavan'ny shaktipat avy amin'ny tompona ara-panahy na ny fomba fandroana ala (fisaorana noho ny herin'ny hazo kundalini-fandroana manokana) sy ny fomba fisaintsainana izay miasa mivantana amin'ity angovo ity, toy ny "Fomba fanitarana". izay novoloriko sy nampianariko nandritra ny taona maro.
Ny fisefoana ny hazondamosina dia mifono rivotra miverimberina hatrany anaty fototry ny hazondamosina, avy eo mandritra ny hazondamosina ary amin'ny farany mandritra ny satrobon-doha dia mety ho mandaitra manokana. Ny fanao izay manohana ny fikorianan'ny kundalini dia ny fihinanana sakafo manta, endrika mihenjana toy ny postures yoga, ny fisaintsainana amin'ny ankapobeny, ny kiropraktika ary ny asa hafa rehetra izay manitsy sy manatsara ny posture. Torohevitra mafy izy io mba hampiharihariana ireo teknika izay manery ny kundalini ho lasa ariva haingana sy manaitaitra haingana.
Rehefa mifoha tsy misy fanerena ny kundalini ary ao anatin'ny toe-javatra mahatsiaro sy manohana, dia tsy mahery setra na manimba. Ny tanjon'izy ireo dia ny: famoronana fanahy tsy azo tsapain-tanana - olona mamoha, izay mahatadidy tanteraka ny toetrany mandrakizay sy tsy manam-petra raha mbola ao anaty fetran'ny vatana voafetra sy mety maty ihany.
Amin'ny toe-javatra toy izany, toa tsy misy maha samy hafa ny foto-kevitra hindu an'i Shiva (fahatsiarovan'Andriamanitra) sy Shakti (ny hazavan'ny kundalini ao anatin'ny olombelona manokana), toy ny nanambaran'i Jesosy tamim-pahasahiana raha vantany vao kundalini ny tenany manokana nifoha, tsy nisy fahasamihafana tena nisy teo amin'ny Ray sy ny zanakalahy, satria ny Fanahy Masina, kundalini, nampiray azy ireo ho firaisana mandrakizay.
Addendum nataon'i Walter Semkiw, MD
Te-hizara ny zavatra niainako tamin'i kundalini aho. Fony mbola tany amin'ny oniversite aho dia naniry ny handinika fisaintsainana, na dia tsy tena hitako hoe nahoana. Sahala amin'ny tantaran'i Shai, dia nianatra kilasy tao amin'ny Transcendental Meditation aho ary nomena manta mba hampisaintsaina. Nataoko tsy tapaka nandritra ny taona tao amin'ny oniversite izany.
Rehefa nanomboka sekoly ara-pitsaboana aho dia nihaona tamin'ny olona iray izay nilaza fa mahay ny misaintsaina sy ny fifohazan'ny kundalini. Nampianatra ahy hanao Chi Gong izy, izay fomba fisaintsainana sinoa izay misy olona mijoro amin'ny toerana manokana hananganana kundalini. Isan'andro, talohan'ny nandehanako tao amin'ny kilasim-pianarana mpitsabo dia nanao izany fisaintsainana izany aho nandritra ny adiny iray. Rehefa nanao io fisaintsainana io aho dia ho sendra jolts ao amin'ny tsanganana amin'ny hazondamosiko. Manisy solomaso aho, ary ny fihanaky ny hazondamosina mahery setra dia nahatonga ny solomasoko nisidina teny an-dohako ary nilatsaka tongotra vitsivitsy tao aoriako.
Tsy nanana traikefa ara-panahy manan-danja aho raha tsy taona maro taty aoriana. Tia mozika foana aho, saingy tsy manana ny fandrindrana ny rantsan-tànana tsara hilalaovana zavamaneno tsara. Fa kosa, satria mpanao fanatanjahantena tena tsara foana aho dia naneho ny fitiavako mozika tamin'ny alàlan'ny ballet fandihizana. Io fialamboly io dia nohatsarain'ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny mpianatro mpandihy dia vehivavy tsara sy manja. Ny asan'ny ballet-ko dia niafara tamin'ny fampisehoana niaraka tamin'ny orkesitra feno an'ny Denver Symphony. Mbola tiako io fahatsiarovana io. Tsindrio ny fampitahana ny sary hanitarana azy ireo.
Taona maro taty aoriana dia nifanerasera tamina orinasan-ballety iray tany San Francisco notarihin'ilay mpahay tononkira Enrico Labayen aho. Na dia tsy mahay mpandihy baleta aza aho mba ho ao amin'ny miaramilany dia nanasa ahy hanatrika ny famerenan'ny orinasany mpandihy i Enrico. Tiako ny mijery mpandihy manan-talenta manao choreography an'i Enrico. Amin'ny famerenana dia manana boky eny an-tanako aho ary toy ny fanaoko dia nanana marika na penina nahatsapa mena izay fanaoko manoratra ao amin'ireo boky izay hovakiako.
Ny orinasa ballet an'i Enrico dia nanao famelabelarana dihy izay nanasongadina mpandihy vehivavy izay nasandratry ny mpandihy ballet lahy tamin'ny lohany. Ilay mpandihy vehivavy dia nametraka ny vatany tamin'ny endrika hazo fijaliana. Raha nijery io fampisehoana io aho dia pen pen ny mena izay nitazona tampoka ary tsy nampoizina tampoka teo an-tanako ary vokatr'izany dia voatery nandoko marika aho ny lafiny anatiny tao anatin'ny havan-tanako ary namorona ny toa sanganasa stigmata hatotanany. Ity tranga ity dia niseho tamin'ny alahady Paska tao 1996.
Nahita ity hafahafa hafahafa ity ary rehefa nitsangana avy teo amin'ny toerana hipetraka aho dia nahatsapa fa efa niova ny fahatsiarovan-tena. Niaina fahasambarana feno aho izay naharitra enim-bolana teo. Nanohy ny asako aho amin'ny talen'ny mpitsabo amin'ny orinasa tsy misy fihenam-bidy fa olona niova aho. Nahatsapa fitiavana ho an'ny zava-drehetra aho. Tamin'izany fotoana izany dia nandalo fisaraham-panambadiana izay nanjary nifanditra aho, saingy amin'ity fahatsiarovan-tena ity dia te-hanao izay rehetra azoko atao amin'ny vehivavy izay saika hisara-panambadiana aho. Na dia tsy teo amin'ny toerana ara-bola hanaovana izany aza aho, dia te hanome azy ilay trano nipetrahantsika.
Araka ny efa voalaza dia naharitra enina herinandro ity fahasambarana ity ary nanjavona. Tsaroako fa tamin'izay fotoana izay dia diso fanantenana aho fa nanjavona ity fanjakan'ny fahatsiarovan-tena ity ary naniry aho fa haharitra mandrakizay izany.
Mino aho fa ity traikefa ity dia notarihin'ny firotsahako tamin'ny fikarohana ny fiainako taloha, izay nahalalako an'i Enrico Labayen nandritra ny androm-piainana taloha nandritra ny fotoanan'ny Tolom-piavotana Amerikanina. Ankoatr'izay, mpandihy maromaro tao amin'ny orinasan'i Enrico no notondroiko ho havako tamin'izany andro izany. Ity tantara ity dia aseho amin'ny antsipiriany ao amin'ny bokiko, Fiverenan'ny revolisionera: Niverina indray ny raharaha momba ny vatana teraka tao amin'ny vatana vaovao sy ny fanahy.
Aseho eto amin'ity pejy manaraka ity ny fomba fijery fohy momba ny fiainako taloha:
Raharaha fanalefahana an'i John Adams | Walter Semkiw
Vokatry ny varotra maharitra mandritra ny voka-dratsin'ny fiakaran'ny Kundalini
Araky ny nitantaran'i Shai Tubali etsy ambony dia mino aho fa manana fisehoana fifohazana kundalini. Rehefa nifankahalala tamin'i Shai aho dia nanontany tena raha miato vetivety sa maharitra ve ny traikefa ananany amin'ny kundalini. Namaly ity fanambarana ity:
"Amin'ny maha-mpampianatra ara-panahy ahy dia ampahany amin'ny tsy fivadihako ny mampianatra afa-tsy izay miorina amin'ny vokatra maharitra amin'ny fifohazana kundalini. Izay nanomboka 19 taona lasa izay dia nitombo sy nihalalina rehefa nandeha ny fotoana. Ny vokany maharitra dia fanjakana mitohy amin'ny famongorana tena ary entina amin'ny fahatsiarovan-tena manerantany. Midika izany fa tsy misy fanandramana amin'ny maha-ego mahaleo tena, satria ny saina, ny fo sy ny vatana dia miasa amin'ny ampahany iray manontolo. Ny momba ahy manokana dia: "Izaho no izao rehetra izao".
Noho izany, mino aho fa manana fifohazana kundalini vonjimaika izay maharitra enim-bolana. Ny mifanohitra amin'izany, ny traikefa kundalini Shai dia henjana kokoa ary niteraka fahatsapana maharitra, fa tsy vetivety, fiovan'ny fahatsiarovan-tena.
Shai Tubali dia mpanoratra ny boky maro ary izy dia mpampianatra ara-panahy miorina ao Berlin, Germany. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny asan'i Shai, miangavy anao hitsena:
Azafady mba diniho ihany koa: Porofo sy fitsipiky ny Reincarnation